Fil d'actualités du 12/12/2018
12/12/2018 - 10:00 : POLITIKA MALOTO: Misy trakta, afisy, t-shirt hosoka haparitaka ary entina hanaratsiana ny kandida laharana faha-25 amin'izao fotoana. Efa nametraka fitarainana teny amin'ny mpitandro ny filaminana ny avy amin'ny K25.
12/12/2018 - 09:30 : MBOLA RAJAONAH : Hampanantsoin'ny Bianco ny tenany saingy tsy fantatra mazava ny taratasin'ady, momba izany raha ny nambaran'ny mpisolovava azy Éric Rafidison ny herinandro lasa teo
12/12/2018 - 09:00 : MARC RAVALOMANANA : Feno 69 taona katroka anio 12 desambra ny tenany. Miarahaba sy mirary soa azy handresy amin'ny ady hatrehany amin'izao fotoana izao satria miandrandra izany ny ankamatoan'ny Malagasy.
10/12/2018 - 14:00 : CAN BEACH SOCCER: Hifandona amin'i Egypte ny Barean'i Madagasikara anio 10 desambra taorian'ny nandreseny 4-3 an'i Côte d'Ivoire omaly.
10/12/2018 - 13:30 : MARC RAVALOMANANA: Tonga nanolotra seau, zinga, koveta ary savony ho an'ireo mpanasa lamba tao amin'ny bassin Bekiraro Andranomanalina i Lalao Ravalomanana sy ny K25.
10/12/2018 - 13:00 : FAMPIELEZAN-KEVITRA: Mitarika ny fampielezan-kevitry ny kandida 25 Marc Ravalomanana teny amin’ny faritra Andavamamba, Bekiraro, Anosibe ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana amin’izao ora izao.
10/12/2018 - 12:30 : BAOLINA KITRA: Tafiditra ao anatin’ireo mpilalao Afrikana mendrika indrindra tamin’iny herinandro iny ily mpilalao ny Barean'i Madagasikara Marco_Ilaimaharitra, Marco Ilaimaharitra, araka ny fandaharana navoakan’ny TV5 izay efa fanaon’izy ireo. 24 taona Ilaimaharitra ary milalao ao amin’ny Royal Charleroi Sporting Club any Frantsa.
10/12/2018 - 10:00 : FANAOVAN-GAZETY: Hivoaka androany 10 desambra ny andiany faha-4 amin'ny gazety boky Trandraka miresaka fanadihadiana lalina na "investigation" nataona mpanao gazety maromaro.
10/12/2018 - 09:30 : FANAONGAN-GAZETY: Hivoaka androany 10 desambra ny andiany faha-4 amin'ny gazety boky Trandraka miresaka fanadihadiana lalina na "investigation" nataona mpanao gazety maromaro.
08/12/2018 - 18:30 : KIDNAPPING : Nisy naka an-keriny teny Soavina i Malick Karmaly, tompona tranombarotra mivarotra PPN, ny atoandro teo. Nanapoaka basy ireo mpaka an-keriny ary ny fiaran'ilay karana ihany no nitondrany azy nitsoaka.
Archive du 20180529
Governemanta vaovao Ireo mety hotendrena praiminisitra…
Adihevitra lehibe eto amin’ny firenena ny ho anaran’izay praiminisitra vaovao, taorian’ny didy navoakan’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC ny 25 mey lasa teo, fa tsy maintsy ravana ao anatin’ny 7 andro ny governemanta.
Depiote Ludovic Andriamarotia « Tao amin’ny governemanta ny lesoka. »
Naneho ny heviny tetsy amin’ny Pavé Antaninarenina mikasika ny fahitany ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC ny depiote anisan’ireo 79 manohana ny fitondrana HVM, Ludovic Andriamarotia, omaly.
Fikambanana Tandroharena “Tsy ampy ny fandravana ny governemanta.”
Nanamafy ny avy eo anivon’ny fikambanana Tandroharena Madagasikara, izay fikambanana siantifika miompana amin’ny fampanjariana ny harena sy ny vakoka ary lovam-pirenena fa mbola mitohy manohana ny hetsik’ireo depiote miisa 73 etsy amin’ny 13 mey izy ireo.
Depioten’ny fanovana “Hofongorina tanteraka ity fanjakana ity”
Mitohy tsy miato ny tolona eny amin’ny 13 mey anio. Tsy mbola tena vita ny tolona, hoy ny depioten’ny fanovana. Maro ny fandresena azontsika, isika no nahavita namaky ny kianjan'ny 13 mey, tsy nahasahy nanilika antsika teto intsony ny mpitandro ny filaminana, hoy ny depiote Hanitra Razafimanantsoa.
Mpitolona eny amin`ny 13 mey Efa tena masaka ara-poto-kevitra
Mihevitra an`ny Malagasy ho bado angamba ry zareo HVM fa mbola misehoseho ihany taorian`ny fampisehoan-kery ny sabotsy lasa teo tetsy Atsonjombe.
Fiarahamonim-pirenena Mizotra any amin’ny fitadiavan-tseza
Namoaka fanambarana izay nanome tsiny mafy ny mpitondra sy ny mpanao politika indray ry zareo avy eo anivon’ny hetsiky ny fiarahamonim-pirenena, Rohy, tetsy amin’ny Cite Ambatonakanga omaly.
Mpanao politika nifamory tetsy amin’ny Pave Mizarazara ny hevitra
Na iombonan’izy rehetra aza fa tokony hiala ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia hita ho mizarazara ihany ny hevitr’ireo mpanao politika mpivory tato ho ato etsy amin’ny Pave Antaninarenina.
Hifankahita eto a..
Eny ho aho ry Jean aa..mahay ianareo ee, vita ny fampiakarana an-drenivohitra olona hameno kianja dia raiakitra indray ny fitsidiham-paritra.Tahaka ireny hoe tsy misy olana ireny eto amin’ny tanàna.Ianareo mandoka tena hoe miasa, ny hafa soketainareo hoe manakorontana.
Kardinaly Desiré Tsarahazana Nihaona tamin-dRajaonarimampianina
Nihaona tamin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha omaly tolakandro ny Kardinaly vaovaon’ny Eglizy Katolika Romana eto Madagasikara Desiré Tsarahazana.
Volana masina Ramadany Miantso ny mpino mba hanalavitra hatrany ny ratsy ireo mpitarika
Efa ho tapitra sahady ny folo andro voalohany hanamarihan’ireo mpino Silamo ny iray volana masina Ramadany. Miantso ny mpino rehetra hanalavitra hatrany ireo zavatra manimba ny fifehezana,
Basket School Tournament 3 x 3 Fantatra ireo ekipa tafita tao amin’ny Zone 1
Taorian’ireo lalao notanterahina tamin’ny sabotsy teo tetsy amin’ny kianja ivelan’i Mahamasina dia fantatra avokoa ireo ekipa isaky ny sokajy tafita avy amin’ny Zone 1 hiatrika amin’ny dingan’ny famaranana hotontosaina amin’ny 16 jona izao ao amin’ny Kolejy St Michel Amparibe.
Orange Kitra Inter-Institut Lasan’ny Sekoly IUM ny amboara sy ny 1 tapitrisa ariary
Nifarana ny sabotsy 26 mey 2018 teo teny amin’ny kianja sentetika Andohalo ny fifaninana kitra lalaovin’olona 6 ny “Orange Kitra Inter-Institut” na ny baolina kitra nifaninanan’ireo sekoly ambony eto an-drenivohitra niisa 19.
Savate Boxe Française Fantatra ireo tompondakan’i Madagasikara 2018
Nandritra ny 3 andro, ny zoma 25 sy sabotsy 26 ary alahady 27 mey tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina no nanatanterahana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2018 eo amin’ny taranja Savate Boxe Française nokarakarain’ny FMSBF & DA na Federation Malagasy de Savate Boxe Française & Discipline Associée tarihan’ny filohany,
Efa iaraha-mahita ary miha mazava isan’andro fa mizotra any amin’ny lalan’ny famonoana hatramin’ny fanantenana ankehitriny ny fitondrana Rajaonarimampianina. Na ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana aza nanome ohatra toy ireny Raiamandreny tsy te hianga-janaka ireny.
Mpianatra tsy nianatra noho ny grevy Tsy maintsy hampanaovina “rattrapage”, hoy ny minisitra
Tsy maintsy hampanaovina “rattrapage” ireo mpianatra tsy afa-nianatra nandritra ny grevy, hoy ny minisitra Paul Rabary, omaly. Tsy hitovy mihitsy mantsy ny fari-pahaizan’ireo mpianatra 1 % tapaka foana sy ireo 99 % izay nanohy hatrany.
Sekoly ambony UPRIM Havadika ho oniversite nomerika
Havadika ho oniversite nomerika ny sekoly ambony UPRIM. Efa an-dalam-pametrahana izany ireo tompon’andraikitra rehetra ao aminy ankehitriny.
Simon Lee mpanorina ny Openflex Hanome vatsim-pianarana ho an’ny tanora mendrika
Rehefa nahatsapa ny fahaiza-manaon’ny mpianatra Malagasy i Stilex na i Simon Lee, tompon’ny orinasa Openflex, dia nanapa-kevitra ny hanohana amin’ny alalan’ny « Université pour tous ».
CEMEA Madagascar Mpikambana miisa 6 no niofana tany Maorisy
Fikambanana dimy avy aty amin`ny Ranomasimbe Indiana miampy ireo rafitra anankiroa ao Eoropa novatsian`ny Vondrona Eoropeanina vola amin`ilay tetikasa “Building Bridges” adika hoe manamboatra tetezana.
Asan-dahalo tany Mampikony II Mpanara-dia 1 maty, miaramila 1 naratra
Malaso iray no lavon'ny balan'ny miaramilan’ny DAS mampandry fahalemana any amin'ny distrikan'i Mampikony ny 26 mey lasa teo.
Maty voatifitry ny kalachnikov ny roa tamin’ireo tanora izay nanao andrimasom-pokonolona tao amin’ny fokontany Antoetra ao Isandra (faritra Matsiatra Ambony).
Nisento tokana ny Ejypsiana raha nandre avy amin’ireo mpitsabo manara-maso akaiky ny fahasalaman’ilay kintan’ny baolina kitra any aminy,
Miaramilan`ny firenena mikambana Feno 70 taona
29 mey 1948-29 mey 2018 : Feno 70 taona anio ny nijoroan’ny miaramilan`ny Firenena mikambana, izay fantatry ny besinimaro hoe “Casques bleus”. Ho fanomezam-boninahitra ny sivily, ny mpitandro ny filaminana ary ny miaramila noho ny fandraisany anjara tamin'ny asan'ny Firenena Mikambana ny fankalazana. Amin' ity taona ity izy ireo dia hanolotra fitaovana tsy manam-paharoa sy manan-danja natokana hanampiana ireo firenena ravan'ny ady, mba hamoronana ny fepetra hahazoana fiadanana maharitra. Fotoana iray ihany koa izao hanomezam-boninahitra sy hahatsiarovana ireo mpiadina mpiaro maherin'ny 3 700 izay namoy ny ainy teo ambany sainan'ny Firenena Mikambana nanomboka tamin'ny taona 1948. Anisan'izany ny lehilahy sy vehivavy miisa 129 tamin'ny taona 2017. Nandritra ny fitopolo taona dia maherin'ny iray tapitrisa ny lehilahy sy ny vehivavy nanompo teo ambany sainan'ny Firenena Mikambana tamin'ny asa fampihorohoroana miisa 71, izay nisy fiantraikany mivantana teo amin'ny fiainan'ny olona an-jatony tapitrisa, miaro ny tsy fahampiana indrindra eto amin'izao tontolo izao ary mamonjy aina tsy tambo isaina.